Nin Shaqadii uu kambani u hayay uu ka Eryay Mishiinka Jeegareeyay kaadhka shaqadu, iyo Amuurihii ka qabsaday, | Biyoguurenews.com
Home Maqaallo Nin Shaqadii uu kambani u hayay uu ka Eryay Mishiinka Jeegareeyay...
Nin Shaqadii uu kambani u hayay uu ka Eryay Mishiinka Jeegareeyay kaadhka shaqadu, iyo Amuurihii ka qabsaday,
Ma ahayn markii ugu horreysay uu ii shaqayn waayo kaarkaygii shaqada, waxaan u malaynayay in la ii baddeli rabo”
Ibraahim Diallo waxaa laga eryay shaqadiisa, waxaana ka ceeyrisay mashiin balse maamulaha kama uusan war haynin arrintaasi.
Sheekada ku dhacday Ibraahim wuxuu kusoo qoray buug uu isaga leeyahay sii uu digniin ugu jeediyo shirkadaha inta badan howshooda ay ku tiirsan tahay maashiinka ama aaladaha casriga ah.
Wuxuu yiri”Mashiinka waxay lama huraan u tahay shirkadaha balse waxaa loo baahanyahay in banii’aadanka uu shaqada la wareego waa haddii maashiinka uu khaladaad sameeyo”
Sheekada Ibraahiim Diallo iyo mashiinka wuxuu billaabmay markii uu mari waayay iridda hore ee laga gallo xafiiskii uu ka shaqaynay oo ku yaalla Los Angeles ee dalka Mareykanka, waxaana markasta albaabka ka furi jiray warddiyeyaasha.
Wuxuu sheegay inuu ku wergeliyay maamulahiisa oo u ballan qaaday inuu wax ka qaban doono dhibaatada lasoo deristay.
Maamulaha ayaa u sheegay Ibraahim in laga saaray nidaamkii uu ku shaqaynayay, qof saaxiibkiisa ah ayaa markii dambe u sheegay in magaciisa uu mashiinka ku daray liiskii dadka shaqada laga joojiyay.
Maalinkaasi ,10 daqiiqo kaddib waxaa u yimid mid kamid ah shaqaalaha shirkadda u qaabilsan shaqaalaynta wuxuuna usoo diray Email-lo sheegaya in Ibraahim qanddaraaskii shaqo laga istaajiyay, waxaana loo sheegay in la xallin doono mashaqada dusha ka fuushay Ibraahim.
Maalinkii dambe Ibraahim waxaa laga saaray guud ahaan nidamkii uu ku shaqaynay, meel cidlo ayuu soo istaagay, waxaa loo soo qoray Email muujinaya inuu isaga tago shaqada, daqiiqado uun kaddib waxaa u yimid labo nin si ay albaabka uga sii bixiyaan Ibraahim oo shaqada mashiinka ka joojisay.
Maamulaha Ibraahim wuu jahwareeray mana garanaya sababta shaqada loo ceeyriyay ninkan.
Ibraahiim wuxuu yiri ” shaqada ayaa laga ii eryay, waxbo kama aysan qaban karin maamulahayga iyo agaasimahayga, cid i garab istaagta ayaan waayay, waxaan qaatay boorsdayda anigoo kasii baxaya goobtayda shaqo”
Xilliggaasi wuxuu 8 bilood kaliya ah ka qaatay qanddaraas saddex sanno ah.
Ibraahim wuxuu yiri “Gebi ahaanba wuu shaqayn waayay kaarkayga shaqo, wuu iga diiday in aan soo galo dhismaha xafiiska uu ku yaallay, waxaa i caawin jiray warddiyeyaasha balse mashiinka ayaa shaqo la’aan i dhigtay, waxaan ahaa dhibane mashiin”
Madaxdii goobta shaqada ee magaalada Los Angeles ayay saddex toddobaad ku qaadatay inay isweyddiyaan su’aasha ah maxaa shaqada looga tiray Ibraahim Diallo? Shirkadda uu ka shaqaynay ninka ayaa isbaddallo lagu samaynay markaasi.
Ninkii maamulaha ahaan jiray xilliggii uu shaqada billaabayay Ibraahiim ayaa shaqada laga eryay, qanddaraaskii shaqana muma uusan cusboonaysiin islamarkaasna magaciisa lama gelinin nidaamka cusub ee shirkadda.
Mashiinka ayaa Ibraahim ku daray liiska dadkii horay shirkadda uga shaqayn jiray.
“markii kaarkayga uu shaqan waayay, waxaa lii soo diray Email shaqada liiga tirayo, waxaan la hakiyay nidaamkii aan ku shaqaynayay”
Inkastoo Ibraahiim Diallo lagu soo celiyay shaqada, muddo saddex toddobaad ah ma uusan helin wax mushaar ah, waxaana xafiiska shaqada looga bixiyay sidii qof tuug ah.
Shaqaaliihi shirkadda ayaa iska foggeeyay inay la shakyastaan Ibraahiim maadama aysan ogayn sababtii uu u maqnaa.
Markii dambe wuxuu go’aansaday inuu shaqo kale raadsado.
sheekada Ibraahim qabsatay waxay digniin u tahay xiriirka shaqo ee ka dhexeeyo qof banii’aadanka ah iyo mashiinka.
Dave Coplin oo ku takhasusay cilmiga saynisga Koombiitarka ayaa yiri ” waa tusaale muujinaya guul daro in mashiinka howl lagu daayo oo kaliya intii baanii’aadanka uu shaqada la qaban lahaa”
Wuxuu intaasi ku daray in xirfadda aasaasiga ay tahay in mashiinka uu isla xisaabtan ku sameeyo shaqaalaha balse run lama dhihi karo waxa uu soo bandhigayo mashiinka.
Previous articleDhakhaatiirtu wa inaay sameeyn ficilo wanagsan si talada aay siiyan bukaanka u qaatanm masalan dhakhtrku ha joojiyo sigaarka, jimicsina ha sameeyaa,
Next articleSomaliland waxba U Noqonmayso hadii Dhamaan la jaro Mucaawimada, Dawlada xamarna Colaadeedeii Ayaay cusbaynaysiisay,Dr sacad cali Shire oo u waramay Idaaacada bbc,da